Manamafy ny tsy hampiharana ilay lalàna vaovao mifehy ny tany an’olontsotra tsy vita titre ireo tantsaha. - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Les 10 projets Malagasy ont été révélés et les trois meilleurs primés il y a 6 heures
Betsaka ireo fitakian’ny Sempama mba hanatsarana ny fanabeazana il y a 7 heures
Manamafy ny tsy hampiharana ilay lalàna vaovao mifehy ny tany an’olontsotra tsy vita titre ireo tantsaha.
Raharinirina Lalaina il y a 2 mois
Nanao fanazavana tamin’ny mpanao gazety ireo fikambanana tantsaha maromaro misehatra manerana an’i Madagasikara teny Ambohijatovo ny alakamisy 22 jolay teo. Nentin’izy ireo nanamafisana ny tsy hampiharana ilay lalàna mikasika ny tany an’olontsotra tsy vita titre izay vao nolanian’ny solombavambahoaka miisa 9 vao farany teo.
Niverin-dalana tanteraka ny zava-misy satria voahozongozona ny fironana faha 3 sy faha 4 ao amin’ny fironana lalàna lasitra na LPF 2015 ao anatin’ny lalàna nankatoavina (Loholona sy Antenimieram-pirenena) ny 30 jona 2021. Voahosihosy sy novain’io lalàna vaovao io tanteraka ny foto-kevi-dehibe ijoroan’ny satan-tany « tanin’olon-tsotra tsy vita titra » araka ny lalàna faha 2005-019 « fiheverana fa fananan’ny olon-tsotra ny tany efa ipetrahany» izay tena manampy betsaka ny tantsaha eo amin’ny fiarovana ny zony eo amin’ny taniny sy ny fomba hahazoany misitraka ny tany eto amin’ny tanindrazany .
Rehefa nohalalinina eo amin’ireo andininy maromaro dia nanova tanteraka ilay toe-tsaina manome vahana ny Malagasy hanana tany eto Madagasikara ary hamery hasina azy miandalana tsy hisitraka sy hitompo ny tanin’i Madagasikara. Hananosarotra ho an’i Malagasy, indrindra ny tantsaha mpamokatra ny hahazo tany. Andininy faha 2 andalana faha 2 izay mametra fa 15 taona mialohan’ny nivoahan’ity lalàna lany tamin’ny taona 2021 ity no azo raisina ho satan-tanin’olon-tsotra tsy vita titra, izany hoe tapitra tamin’ny taona 2006 izany ny fisian’ny satan-tanin’olon-tsotra tsy vita titra.
Ny fepetra fanamaintisamolaly no tsapa fa natao hamafana ny satan-tanin’olon-tsotra tsy vita titra.
Ny andininy faha 6 dia mitaky ny fanatanterahana ny fanamaintisamolaly mandritra ny 15 taona mialoha ny andro mampanan-kery ity lalàna vao lany ity, lava loatra izany fe-potoana izany. Lasa natao fitaovana nentina namonoana ny satan-tanin’olon-tsotra tsy vita titra ny karatany ho
an’ity lalàna vaovao ity. Ny andininy faha 21 sy faha 22 dia manodina tanteraka ny foto-kevitra “fiheverana fa tanin’olon-tsotra ny tany efa nipetrahan’ny olom-pirenena, ny fipetrahana amin’ny tany no mamorona ny karatany fa tsy ity farany no mamorona ny zo fitompoana ny tany. Eto dia lasa ny karatany no fototra ijoroan’ny zo fitompoana amin’ny satan-tanin’olon-tsotra tsy vita titra fa tsy ny fipetrahana aminy.
Fanamaivanan-daja ny karatany ny fahafahana manafoana azy ao anatin’ny enim-bolana nivoahany sady mifanohitra amin’ny lalàm-panorenana. Ny andininy faha 26 amin’ity lalàna vaovao izay resahana eto ity dia manome fahefana ny ben’ny Tanàna izay nanao sonia ny
karatany hanafoana izany ao anatin’ny enim-bolana miatomboka ny andro nanaovany sonia, raha toa ka mbola eo am-perinasa izy. Tsy mifanaraka amin’ny fotokevitry ny Lalàm-panorenana miorina eo amin’ny fisaraham-pahefana io andinin-dalàna io. Ny ben’ny Tanàna izay fahefana mpanatanteraka namoaka karatany izay miaro zo fitompoana tany dia tsy afaka manafoana izany, fa anjaran’ny fahefana mpitsara no manafoana izany satria ity farany no mpiahy
ny zo fitompoana. Noho izany ny fametrahana io andininy io dia endrika fandemena ny laza sy lanjan’ny karatany eo amin’ny fomba rehetra ampiasana azy indrindra amin’ny fanaovana antoka azy araka ny andininy faha 29.
Tsy mahay izany lalàna izany izahay hoy ity tantsaha iray avy any Sofia, mamboly miompy no fantatray sy hainay tsara. Mila mifampiresaka amin’ny tantsaha izany raha mila kitihina ny lalàna mikasika ny tany raha tiana ny hampandroso ny eny ambanivohitra. Efa nisy ny lalàna teo aloha, azo lazaina fa nilamina ny rehetra. Nokitihina ilay izy. Izay ve no maika? Ny plan d’aménagement aza tsy misy sa misy? Mila jerena sy dinihina izany satria dia tena manahirana sy manakorontana ireo tantsaha, indrindra fa fianakaviana mpamboly, izay sady kely ny taniny no zara raha misy vokatra miakatra, ny fandriam-pahalemana etsy an-daniny tsy ahafahana miasa milamina.
Prix Orange de l’Entrepreneur Social 2021 : Les 10 projets Malagasy ont été révélés et les trois meilleurs primés - il y a 6 heures
Fitakiana sendikaly : Betsaka ireo fitakian’ny Sempama mba hanatsarana ny fanabeazana - il y a 7 heures
Sociales RSE : La Fondation Axian a présenté ses activités et ses réalisations - il y a 5 jours